Ngaphantsi kweLanga laseTuscan! Forestarìa! - I-Airbnb
Ngaphantsi kweLanga laseTuscan! Forestarìa!
Valgiano (Capannori, LU), Tuscany, Italy
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguLa Forestaria
ULa Forestaria yi-Superhost
IForestarìa yindlu yefama elula, enqabileyo kwaye eyinyani kwiinduli ezisemantla eLucca. Apha ungafumana ukuthula noxolo.Amagumbi ethu alula kwaye akhululekile ngombono omangalisayo kwiinduli kunye nentlambo.Isidlo sakusasa se-italian esilula sibandakanyiwe :-) kodwa unokongeza amatsha kunye neepakethe ezenziwe ekhaya (7€)
INdu. Eli ligumbi elincinci esinalo kwindlu yethu yasefama (9 square metres), kodwa ikhululekile :-)
IForestarìa ligama lefama yethu, ikhuthazwa yimbali edumileyo
kaLucca esaxelelwa ngumakhulu wethu. Ngokwentsomi
IForestarìa sisiporho esifumaneka kwiindawo ezininzi zenduli
ULucca, umfazi omncinci omncinci, obhityileyo kwaye ophantsi ...
Ngokukhuthazwa yinkumbulo yeli bali, sagqiba ekubeni sitsalele umnxeba wethu
Iyinxalenye yenkampani equka ifama entle yohlobo lwelizwe
apho siye safumana igumbi lokuthengisa
iimveliso zethu. Ipropati yathengwa kwi-80s kwaye
ngokuthe ngcembe ngenxa yomsebenzi wokuhlaziya uba
Inkampani inxulumene ikakhulu nesivuno somnquma kunye
ukuguqulwa kwabo ibe ioli elungileyo kakhulu extra virgin, kwi
ukuveliswa kwemithi yomnquma engaphezu kwama-2000.
Umjikelo wemveliso oquka ingqokelela,
ukusetyenzwa kunye nokuthengisa kwinkampani, ibonelela
ubudlelwane obuthe ngqo phakathi kwemveliso yezolimo kunye
abathengi bokugqibela, njengakwitsheyini
Ukongeza kwishishini eliphambili lenkampani
Sineziqhamo ezidibeneyo kunye nemifuno
ixesha lonyaka kwigadi yethu kunye nokulinywa kwe
45 nemithi yama-apile kunye nama-apile;
kubandakanywa nezinye iintlobo zeziqhamo: kiwi, ipere, ipesika,
iiplamu, ii-walnuts, njl.
4.85 · Izimvo eziyi-372
Kufuphi nefama yethu, unokufumana ii-wineries ezimbini ezimangalisayo apho unokufumana i-wine degustation kunye nefama ekhethekileyo evelisa itshizi yabo. Kukho iintlobo ezi-4 zeendawo zokutyela ukusuka "ezitshiphu & zasendle" ukuya kubunewunewu :-)
Umbuki zindwendwe ngu- La Forestaria
Izimvo eziyi-1 643
Iklasi yokupheka + isidlo sangokuhlwa + iwayini (ngesicelo, i-80 € / umntu ngamnye)